जुठे : जातीय विभेदको मजाक – CentralKhabar – No 1 Online News Portal from Nepal
सेन्ट्रल डेस्क प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार १४:१३
‘जुठे’ नामको टेलिश्रृङ्खला बन्द हुनु पर्ने टेलिश्रृङ्खला हो । यसले न दलितको मुद्दालाई उठाएको छ न त्यो सिरियल बनाउनेको गिदिभित्र त्यति बुद्धि छ । दलित पात्रलाई सिर्फ मजाकको बिषय बनाईएको छ । दलित पात्रलाई मुल पात्र बनाएपछि पात्रगत ज्ञान लिनु, कथा कुन समयको हो त्यसको ऐतिहासिकता अध्ययन गर्नु अनि न गतिलो सिरियल बन्छ । तर त्यो सब केही छैन ‘जुठे’ टिमसँग । अरू त अरू आफ्नो बिधागत आधारभूत ज्ञानसम्म रैनछ सिङ्गो टिमसँग । दलित पात्र केन्द्रित यसको कथा “नाटककै हो नौट्ङकी नै हो” भन्दा ज्यादा छैन । बिचरा पात्रहरू न्याउरो मुख पारेर टिलपिलाउन र अकारण मुठ्ठी सुर्काउनबाहेक सक्दैनन् । बनावटी कथालाई जबर्जस्ती सिरियलमा रूपान्तरण गर्दा न पात्रको आँसुले छुन्न न खुशीले । सामाजिक बिषयबस्तु त्यसमा पनि अझ जातिय विभेदलाई लिएर यस्तो श्रृङ्खला बन्नु दुखद हो ।
सिरियलको पात्र हेरौँ, एउटा जिम्दार छ । जो कुनै कोणबाट जिम्दार लाग्दैन । न उसमा अाजभन्दा ३-४ दशक अघिको सामन्तीपनको सुहाउँदो झलक छ न पुरूष हुनुको अहम् ( बरू जिम्दार्नीले बुहारी र छोरीलाई गरेको कडाईबाट “महिलाको शत्रु महिला नै हुन” भन्ने देखाउन अस्वभाविक प्रयास गरेको छ।)! जिम्दार नोकरचाकरबिहिन छ । उसको छोरोसमेत गाँउमा हैकम जताउन छाडेर परदेश पुगेको छ । उ सिर्फ नाम मात्रको जिम्दार हो । अर्को पात्र छ चाउरे । उ ‘तल्लो जात’को हो। उसको छोरी बलात्कृत हुन्छे, जिम्दारको पाहुनाबाट । यस्तो अवश्थामा त्यो पात्र बाउ हो कि बलात्कारी कतैबाट फरक देखिदैन। यो कस्तो पात्र चित्रण हो ?
बलात्कृत चाउरेकी छोरी केही समय अघि जिम्दारको बुहारीसँग ‘हात हालाहाल’ गर्न पुग्छे । केही समयपछि आफू बलात्कृत भएको समेत भन्न नसक्ने स्थितिमा हुन्छे । जातिय बिभेदले जर्जर भएको ठाँउमा जिम्दारको बुहारीसँग भिड्न तयार ऊ आफू बलात्कृत भएको चै बोल्न सक्दिन । यो कस्तो पात्र चित्रण/प्रवृति हो ? कसै गरि हजम हुदैन । झन बलात्कृत पत्ता लगाउने अभिभारा ‘गु न गोबर’को पात्र गोथेलाई छाडिएको छ । यो गोथे पात्र त्यहि हो; जसले यो सिरियलको निर्देशन र कथा लेखन गरेका । जुन बिलकुल “गोथे” जस्तै बनेको छ ।
पात्र चित्रण र प्रवृति त ‘मजाक’ भन्दा ज्यादा त छैन नै । कथा पनि त्यस्तै खेदजनक छ । कथा रूपान्तरण त झन तमासा सिवाय केही छैन । यति लथालिङ्ग, यति ‘पुङ्ग न पुच्छर’को सिरियललाई युट्युब च्यानलको कमेन्ट सेक्सनभरि ‘वाह! वाह ! दामी’ भनिएको छ । हामी मानसिक रूपमा यति दरिद्र कसरी भयौँ ? केही दर्शकलाई लाग्दो रहेछ ‘यसले पुरानो समय देखायो’! अलि अलि ‘कमन सेन्स’ हुनेले यसमा ऐतिहासिकता भेट्न सक्दैन । बरू जातिय अहमको ‘नन-सेन्स’ चै छ्यालब्याल भएको पाईन्छ । ‘गोथे’ दाइ दलित मुद्दाप्रति बेखबर जमातको ‘माईण्ड सेमिङ्ग’ गर्दै ‘वाह ! वाह!!क्या दामी ! ‘ बटुल्न बन्द गर्नुस।
सिरियलको पहिलो अङ्कमा जुठे भन्ने पात्रले असिँया अर्जाप्छ तर बिँड नफुकाली बिँड नफुकालि अर्जाप्दा बिँड डढ्छ भन्ने पात्रगत सामान्य ज्ञान पनि ‘गोथे’ दाईसँग छैन । जुठे ‘जिम्दारको छोरी’सँग प्रेम गर्ने उमेरको छ । प्रेममा पर्ने त्यो ‘बूढो’ पात्र गर्धनमा गुलेली झुण्ड्याएर हिड्छ ! के बिधि मजाक गरेको ‘गोथे’ दाइ ? ‘गोथे’ दाईले पहिलो अङ्कमै चाउरे भन्ने अर्को पात्रलाई पनि अनावश्यक रूपले ‘साईड ब्याग’ भिराउनु भएको छ । गोथे दाईले पहिलो अङ्कमै ‘सियोमा धागो छिराउन’ नसक्ने चाउरेलाई ‘दाउरा राम्ररी चिर्न सक्ने’ बनाउनु भाछ । गोथे दाइ के गरेको यस्तो यार ?? सिरियल बनाउने, लेख्ने थोरै पनि ज्ञान छैन भने सामाजिक ईस्युमा यति असामाजिक काम नगर्नु क्या ! गोथे’ दाइ दलित मुद्दाप्रति बेखबर जमातको ‘माईण्ड सेमिङ्ग’ गर्दै ‘वाह ! वाह!!क्या दामी ! ‘ बटुल्न बन्द गर्नुस । मेरो भन्नू यति छ कि यसको थप ईपिसोड निकाल्न बन्द गर्नुस् !!
मैले तेह्र श्रृङ्खलामध्ये सात श्रृङ्खलासम्म ‘जुठे’ हेरेँ । यसको टिमलाई मेरो समय सत्यानाश गरेकोमा अश्लिल गाली गर्न मन छ । त्यति ‘भावानात्मक उत्तेजना’मा नअाईकन भन्दा कम्तिमा यो भद्दा मनोरञ्जन बन्द गर्नुस् ।